मंगलवार, १० भाद्र २०७६,	आहाखबर	1.12K
कामको मामलामा सबै मान्छेको धारणा समान हुँदैन । कोही पाईलट बन्न चाहन्छन् भने कोही खेती किसानी गरेरै आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छन् । तर सबैको समान चाहना हुन्छ आफ्नो काममा कसरी सफल हुने ?
भनिन्छ, सफल हुने चाहना सबैको हुन्छ । सफल त्यस्ता व्यक्ति मात्रै हुन्छन् जो सही समयमा उपयुक्त निर्णय गर्न सक्छन् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छन् । कुनै पनि काममा कसरी सफल हुने त ? यो आलेख सपल हुन चाहने व्यक्तिका लागि केही हदसम्म प्रेरणादायी बन्न सक्छ ।